Nguva Yakakosha Yehuswa Kudzora Pakati PeKudyara Mbatatisi, Row Kuvhara - Potatoes News
NeChishanu, Nyamavhuvhu 6, 2021
Kubva pakudyara mbatatisi kusvika pakuvhara mutsara inguva yakabatikana yevarimi. Inguvawo yekubatikana kwemasora. Kuisa mishonga yesora panguva yakakodzera uye kubatanidza nekurima mabasa pakati pekudyara nekuvharwa kwemitsara ndiyo kiyi yekudzora sora kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Nguva kubva pakudyara kusvika pakubuda inogona kuva mavhiki matatu kusvika mana uye, kubva pakubuda kusvika pakuvhara mitsara, mana kusvika mashanu evhiki.
Hezvino chikonzero nei nguva iri kukosha.
Yunivhesiti yeIdaho tsvagiridzo inoratidza kuti 5% kana yakakura US Nha. 1 gohwo kurasikirwa kunoitika kana mvere nightshade isingadzorwe kubva mazuva mashoma mushure mekubuda kwembatatisi kusvika mazuva makumi maviri nemaviri gare gare (maviri ane mvere nightshades pamamita mutsara). Kana chete 22 pa m mutsara ichikwikwidza mwaka wese-wakareba, ipapo zvakaringana se1% US Nha. 21 goho rarasika.
Kushandisa nzira yakasanganiswa yekudyara masora kunopa kudzora kwehuswa kwakanyanya mumatato: zvetsika, zvemakemikari, zvemakemikari, uye maturusi maturusi anowanikwa pakudzora huswa, pane kuvimba nechinhu chega chega chekudzora sora.
Pane nzira dzakasiyana dzekurima-nguva kunze uko uye chinyorwa ichi chinotarisa pazviviri. Vaviri vanoshandisa hilling / dura rekuchera mashandiro.
Kuchera tangi kune dzimwe nguva kunodanwa nerimwe remazita ezita, Dammer Diker.
Kune ese ari maviri mamiriro, iyo dura rekushandisa tillage michina yakagadzirirwa kumusoro kuchikomo panguva imwe chete.
Vamwe vanoshandisa vanobaya sprayer kuseri kwemidziyo yekurima nekumwaya-sanganisira mishonga yesora (Mufananidzo 1).
Zvisinei nemamiriro ezvinhu, iyo yekumisikidza-dhamu rekuchera tillage ndiyo yekupedzisira kuitirwa kusvika pakukohwa.
(Yakakodzera kukwirisa ruzivo rwenguva inopihwa panoperera chinyorwa chino.)
Mufananidzo 1. Reservoir tillage / hilling michina ine uye isina sprayer yakasungirirwa; dhamu rekuchera "divots" mumunda.
Verenga uye uteedzere iyo herbicide label
Tangi-sanganisa mishonga yesora ine nzira dzakasiyana dzezviito kuitira kuti uwane huwandu hwesora kudzora uye kudzivirira kana kunonotsa kukura kwehuswa husingaurirwe nemasora. Dhizaini herbicide tank-musanganiswa kunongedza masora aripo mumunda wakapihwa. Tenderera nzira dzekuuraya herbicide kubva pagore-kusvika-gore.
Mufananidzo 2. Dhonza pamberi pembatatisi kubuda uye kukora-dhamu rekucheresa mushure mokubuda kwembatatisi. Mishonga yesora inoiswa mushure meiyo hilling. Yechipiri postemergence spray inogona kudikanwa.
"Dhonza" pamberi pembatatisi kubuda uye "hilling-dziva tillage" mashandiro mushure mekubuda kwembatatisi. Postemergence mishonga yesora inoiswa mushure meiyo hilling. Mufananidzo 2.
Dhonza-dhiza ine harrow kana mimwe michina yakafanana "kugogodza" chikomo chine mwero chakavakwa pakudyara kuitira kuti mhodzi yembeu ive padyo nepamusoro. Munda wakakwenenzverwa, zvisinei, uye kunze kwekunge chaiyo yekudyara ine GPS maficha yashandiswa, yekupedzisira hilling-dura rekucheresa haigone kuitika kusvika mushure mekubuda kwembatatari apo mitsara inogona kuoneka.
Dhonza-kure uye hilling zvinogona kudzora sora rakatobuda. Mimwe mishonga inouraya sora inogona kutosanganisirwa neyekudzika pashoma yekucheka nekuchengetera kutorwa kuti isakanganise mhodzi yembeu kana nhungirwa dzembatatisi padyo nepamusoro.
Nekudaro, sezvambotaurwa, kurima mushure mekuuraya mishonga yesora kwatoiswa kunozovhiringidza chipingamupinyi chemushonga wesora.
Inobudirira nzira yekushandisa herbicide mushure mekuchera-dhamu rekuchera: Chemigation; kubatanidza pfapfaidzo yekuseri kuseri kwemidziyo wozosasa inosanganisa; kushandiswa kwesprayers yakagadzirirwa kutakurirwa mumunda wese wakave nedura-rekucheresa asi inochengetedza huwandu hwekupfapfaidza kwekupararira kwemushonga.
Kana mishonga yesora ichingoshandiswa chete iine chiitiko chevhu, iko kunyorera kunofanirwa kuitika nekukurumidza mushure mekumusoro kwekukwirisa sezvinobvira.
Mishonga yesora inogona kushandiswa kuMuenzaniso 1 (kunyorera mushure mekubuda kwembatatisi)
Rimsulfuron (Matrix nevamwe)
Inogona kudzora ese akabuda uye asina-kubatanidzwa masora.
Zvakanakisa kana masora asingasviki 1 inch kureba.
Split postemergence + postemergence application inobvumidzwa.
Inogona zvakare kuiswa preemergence + postemergence.
Metribuzin (akawanda mazita ekutengeserana)
Inogona kudzora yakabuda masora uye isina-kubatanidzwa masora.
Zvakanakisa kana masora <1 inch kureba.
Preemergence + postemergence kupatsanura kunyorera kwakanyorwa.
Postemergence + postemergence split application inobvumidzwa muIdaho, Oregon, uye Washington chete.
(Cherekedza: Mimwe mbatatisi mhando haigone kutsungirira metribuzin.)
Isingadzori yakabuda masora.
Yakanyanya kugadzikana, saka kana ikaiswa nepasi-rig pane kugadzirwa, inofanira kuiswa (inosasa -kusanganisa inosarudzwa) zuva rimwe chete sekushandisa.
Pendimethalin (Prowl H2O nevamwe)
Kwekutanga postemergence inosvika padanho re6-inch yekukura kwembatatisi kwakabvumidzwa
chitsamba: Inogona kuiswa pakudhonzwa -zwa, zvisinei, kurima kunotevera kuchakanganisa sosi yehuswa uye masora anogona kubuda.
Postemergence chemigation kuburikidza nepakati pivot inobvumidzwa.
Postemergence application inogona kuiswa pamusoro pechikumbiro chekare.
Muganhu, musanganiswa wakagadzirwa we s-metolachlor + metribuzin.
Metribuzin muchigadzirwa ichi inogona kudzora masora akabuda.
Tangi-kusanganisa neyekuwedzera metribuzin inobvumidzwa sekureba sekukwira mwero uye zvinyorwa zvakatarwa zvichiteerwa.
Metolachlor (Stalwart nevamwe)
Postemergence huswa kudzora chete nehunoshandaxydim (Poast kana Poast Plus nevamwe) uye clethodim (Sarudza nevamwe).
Mufananidzo 3. Hapana dhonza-kure. Kuzadza-dura rekucheresa pamberi pembatatisi kubuda. Mishonga yekuuraya sora inoiswa mushure meiyo hilling asi ichiri kutangisisa mbatatisi. Iyo inotevera postemergence herbicide application inogona kudikanwa.
Do kwete chemedza izvi postemergence, huswa-chete mishonga yesora.
Kwete kudhonza. Kushambidza-dura rekuchera mashandiro pasati pabuda mbatatisi iyo inoteverwa nekuzora mushonga wesora zvakare mbatatisi isati yabuda. Iyo inotevera postemergence herbicide application inogona kudikanwa. (Ona Mufananidzo 3.)
Iyo yekumhara-dhamu rekuchera mune ino mamiriro inogona kuitwa chero nguva mushure mekudyara asi mbatata isati yabuda.
Zvisinei nenguva, "mubhedha wakachena" unogadzirwa nekuti masora akabuda anogona kudzorwa neichi chiitiko.
Zvino, mishonga yesora iyo inogona chete kushandiswa preemergence inogona kushandiswa kuMuenzaniso 2.
Kushandiswa kweherbicide kunofanirwa kuitika nekukurumidza mushure mekukwirisa sezvinobvira kuti ubudirire.
Sanganisira ese preemergence-akaisa mishonga yesora nekukurumidza mushure mekushandisa sezvazvinogona kuita kuti mushonga wesora ushandiswe. Kana ikaiswa nepasi, mvura kana madiridziro anodiridzira anofanirwa kuitika kuti ubatanidzwe uye kumisikidzwa mudenga repamusoro-masendimita maviri evhu panotumbuka mbeu zhinji dzesora.
Semuenzaniso weAptlook + Linex yakashandiswa mune ino mamiriro inoratidzwa muMufananidzo 4.
Preemergence-chete mishonga yesora yechiitiko chechipiri
Mufananidzo 4. Sekutsanangurwa kwechiitiko chechipiri, kudzora masora mushure mekushanda kwechikomo nekushandisa kwakakodzera-nguva kwekutanga kweOptlook + Linex (yakashandiswa pasi-uye inosaswa-mukati meawa makumi maviri nemana ekunyorera).
Chateau inofanirwa kuiswa nekukurumidza sezvinobvira mushure mekudyara nekuti inokwana 2 masendimita evhu rakagadziriswa rakafukidza mbatatisi kumera pakushandisa (uye kubatanidza) nguva inodiwa.
Kuti ushandise mumatezi akarimwa nepamusoro pemadiridziro chete. Chete zvekushandisa muIdaho, Washington neOregon ine Special Local Needs 24 (c) kunyora. Tarisa mamiriro ako kune zvinyorwa uye nemazita ekupera kwemazuva.
Trifluralin (Treflan nevamwe)
Linuron (Linex kana Lorox nemamwe mazita ekutengeserana)
Linex ine chimwe chiitiko pane masora akabuda, zvisinei, inofanirwa kuiswa pamberi pembatatisi kubuda kuti isakuvara.
Zve Linex pamatatata akakura kumadokero kweRedy Mountains: Idaho, Washington neOregon parizvino vane Special Local Needs 24 (c) mavara. Tarisa nyika yako kune mazuva ekunonoka kupera uye zvimwe zvirambidzo.
Sulfentrazone (Willowood Sulfentrazone 4SC nevamwe)
chenjedzo: Yakanyanya kufamba muvhu ine pH ye7.5 kana yakakura uye / kana inosaswa inosanganisirwa nemvura ine alkaline, kunyanya kana ivhu rakavezwa-rakagadzirwa, rinogona kuwedzera huwandu hwesora rinowanikwa mumushonga wevhu - yakanaka kudzora masora, zvisinei, yakawedzera kuwanikwa kunogona kukonzera kukuvara kwezvirimwa. Shandisa yakaderera mwero kune yako ivhu dhizaini uye pH.
Yakagadzirwa pre-musanganiswa we sulfentrazone uye metribuzin (Willowood MTZ 4SC)
Inotevera postemergence herbicide application inogona kudikanwa
Muenzaniso 1 ungangoda yechipiri postemergence herbicide application. Chiitiko chechipiri chingangoda mushonga wekuisira mushonga wesora pamusoro pechishandiswa chekutanga nekuda kwesimba rinorema remasora, masora anononoka kumera, uye / kana chishandiso chekutanga chakange chisina chiitiko pane mamwe marudzi esora.
Mufananidzo 5. Metribuzin yakaiswa postemergence kumasora uye mbatatisi sezvakatsanangurwa paMamiriro 1, asi mamwe masora aive akakurisa panguva yekunyorera kuti isadzorwe. Uye zvakare, metribuzin haishande pane nightshade ine mvere.
Matrix uye / kana metribuzin anowanzo shandiswa mune ino kesi sezvo achigona kuiswa postemergence kune iyo mbatatisi uye kuita chiitiko pane akabuda masora.
Nguva maererano nehukuru hwemasora uye herbicide sarudzo yakakosha zvakanyanya. Muenzaniso we metribuzin wakashandiswa postemergence inoratidzwa muMufananidzo 5.
Burndown mishonga yesora yemasora yakabuda pasati pabuda mbatatisi uye pamberi kana mushure mekudhonzwa-uye / kana kukosheswa-kwedziva kurima?
Glyphosate, paraquat, uye / kana carfentrazone (Chinangwa) zvakanyorwa mumatezi.
Iva nemabasa epamuviri chete (hapana ivhu rakasara kuita).
Inofanirwa kuiswa mbatatisi isati yabuda (kunyangwe isati yatsemuka).
Kurima mushure mekushandisa kwakanaka, zvisinei, nguva yakaringana yekuti mishonga yekuuraya sora ishande inofanira kuitika pamberi pokurima.
Yakakodzera hilling nguva yekudzora sora
Yunivhesiti yeIdaho zvidzidzo zvakaratidza kuti kana sora rakawanda uye rakakwikwidza mbatatisi miriwo inorimwa, kurima kana masora ari madiki uye mbatatisi zvirimwa zviri 4 kusvika ku6 inches kureba zvinogona kupa hupfumi huswa kudzora.
Zvisinei, kukwereta mbatatisi yakakura kudarika masendimita masere kusvika gumi kunogona kukonzera midzi-kutema uye kuderedza zvibereko zvehutu uye hutano.
Kurima kwakawanda kunogona kukonzera kuumbika kwevhu, kudzikisira aeration uye kukura kwembatatisi uye kugadzira mavhinga anopwanya mbatatisi pakukohwa.
Kurima mushure mekuuraya mishonga yesora kwakatovhiringidza chipingaidzo chemushonga uye kuunza ivhu risina kurapwa, uye pamwe mbeu yemasora.
Kurima kwakaringana nenguva kunogona kudzora kumera kwekutanga, masora egore rose asina kukura kupfuura shizha maviri kana matatu, ayo anowanzoita <1-inch-tall, panguva yekurima (Mufananidzo 6 pazasi).
3- kusvika 4-inch masora akareba dzimwe nguva anogona kubviswa, zvisinei, kana> 4 inch, ipapo kurima hakushandi (Mufananidzo 7 pazasi).
Kunyangwe hazvo masora akakura achivharwa nevhu panguva yekurima, anogona kurarama nekumukazve.
Kana ivhu rakanyorova, kurima kunofanirwa kunonoka kuitira kuti kusaitika kuitike uye masora haakwanise "kudzika midzi" muvhu rakanyorova.
Mune-mutsara masora anogona kunge asingadzorwe neiyo hilling-dura.
Nguva dzinokosha. Kurongeka kwemabasa ekurima akarongeka nenguva uye mishonga yesora yakakosha kuti ubudirire, kudzora masora kwenguva yakareba. Masora-saizi zvinhu. Anobudirira masora ekudzora matanho anofanirwa kuitiswa pamberi pekuvharwa kwemazamu embatatisi. Kubvumira masora kuti agare kwenguva yakareba sevhiki nhatu mbichana dzabuda zvinogona kukonzera kurasikirwa negoho.
Matrix uye metribuzin ndiyo chete mishonga yesora iyo yakachengeteka kubuda mbatatisi uye vane chiitiko chemashizha pane akabuda mashizha akasvibira masora.
Zvikasadaro, chete Prowl H2O (kana 3.3EC), Eptam, Dual Magnum kana Stalwart inogona kuiswa kune akabuda-mbatatisi zvakachengeteka - havazouraya masora akabuda, zvakadaro. Muganhu, musanganiswa we metribuzin uye s-metolachlor unogona zvakare kuiswa mushure mekunge mbatatisi yabuda uye iine chimwe chiitiko pane masora akabuda.
Kufanirwa nembatatisi chete - Chateau, Linex, Outlook, Sonalan, Sulfentrazone, Treflan neReflex (panonyorerwa kushandiswa).
"Kupisa-pasi" mishonga yesora yakadai se glyphosate, Chinangwa, kana paraquat inogona zvakare kuiswa preemergence kune mbatatisi. Mirira kwenguva yakareba zvakakwana mushure mekushandisa usati wasvika pane chero tillage!
Tangi-sanganisa / tenderera mishonga inouraya sora nenzira dzakasiyana dzekuita uye dhizaini yemasanganiswa tangi kunongedza sora riripo mumunda wakapihwa.
Mufananidzo 6. YAKAKODZERA KUZADZIRA TIMNG: Hukuru hwesora rakawanda rakabuda pano rakaonekwa pakati pemitsara yembatatisi iri cotyledon kusvika kumashizha maviri echokwadi, asingasviki 1-inch kureba, saka kurimwa panguva kana nguva ino isati yasvika kazhinji kunoshanda pakudzora masora aya. .
Mufananidzo 7. HILLING YAKANONOKA. Mazhinji masora akafananidzirwa pano akakura kupfuura masendimita matatu pakureba uye hilling yaisazopa kudzora kunoshanda.
Nguva yakakosha kudzora masora pakati pekudyara mbatatisi, kuvharwa kwemitsara NaPamela JS Hutchinson, Potato Association yeAmerica
Tags: mushonga wesorakudyara mbatatisitsvakurudzoYUNIVESITI YEDHAHOkudzora masora
Pfungwa 4 varimi: kurima kana kusarima - sezvakanakisa?
CHITSVA CHINOGARA CHINANGWA